त्वचाको देखापर्ने हरेक समस्यामा भिटामिन ‘इ’ क्याप्सलनै लाभदायक ! – MediaNP
त्वचाको देखापर्ने हरेक समस्यामा भिटामिन ‘इ’ क्याप्सलनै लाभदायक !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०१२:०८0
मार्केटमा पाइने स्किनकेयरमा भिटामिन ‘इ’को प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसकारणले गर्दा स्किन, कपाल, पिम्पल्स, दागधब्बाबाट छुटकारा पाइन्छ । भिटामिन ‘इ’ मा मजबुज एन्टी अक्सिडेन्ट पाइने कारणले यस्तो समस्या समधान भएको हो । यदि त्वचा वा कपालमा कुनै पनि किसिमको समस्या देखिएको छ भने भिटामिन ‘इ’ क्याप्सलको प्रयोग गर्नु निकै फाइदाजनक छ आज हामी भिटामिन ‘इ’ क्याप्सलको प्रयोग कसरी गर्ने र कस्ता फाइदा हुन्छन् भन्ने बारेमा बताउँदैछौं । यस्ता छन्, भिटामिन ‘इ’ क्याप्सलका फाइदाहरुः
१. अनुहारको दाग, धब्बा हट्ने । तपाईको अनुहारमा दाग वा धब्बा छ भने भिटामिन ‘इ’ क्याप्सुललाई एउटा सुईले खोपेर सबै तेल निकालेर अनुहारमा लगाई रातभरी राख्नाले दाग धब्बा हटेर जान्छ । यसको प्रयोग भने लामो समय सम्म गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२.त्वचा रुखा नहुने । त्वचाको प्राकृतिक उपचारको लागी भिटामिन ‘इ’ क्याप्सल निकै फाइदाजनक छ । यसले त्वचाको कोशिकाको निमार्ण गर्नको लागी सघाउँछ । यसको लागी करिब २ चम्चा भिटामिन ‘इ’को तेलमा २ चम्चा एलोवेलाको जेल वा गुलाबको तेल, सिसिको बटर मिलाएर दैनिक दुईचोटी लगाउनाले त्वचा रुखो हुने समस्याको समधान हुनेछ ।
३.स्टे«च माक्र्स स्ट्रेच मार्क्सबाट छुटकारा पाउनको लागी करिब १२ वटा जति भिटामिन ‘इ’ को क्याप्सललाई फोरेर कोको बटर र लोबन तेलको साथमा धर्सा भएको ठाउँमा लगाउनाले हटेर जान्छ ।
४.चाउरीपना छुटकारा एक कचौरामा एउटा भिटामिनको ‘इ’क्याप्सल फोरेर यसमा जैतुनको तेल हाली राम्ररी मिसाएर अनुहारमा लगाउनाले लामो समयसम्म चाउरीपनाको समस्या देखापदैन् ।
५.त्वचा नफुट्ने त्वचा डा«ई भएको ठाउँमा एउटा भिटामिन ई क्याप्लसको तेललाई निकालेर लगानाले त्यो भाग सफ्ट हुनेछ । भिटामिन ई क्याप्लस ओठमा पनि यो लगाउन सकिनेछ ।
जान्नुहोस्, भ्रम रोग के हो, किन हुन्छ ? (उपचार विधीसहित)
किन खाने खरबुजाको बिज ? यस्ता छन् महत्वपूर्ण फाइदाहरु !